ဘုရားဌာပနာ ဖောက်ထွင်းသူတွေ မသိလိုက်တဲ့ ပုဂံဘုရားတွေမှာ ကျိန်ဆိုထားတဲ့ ကျိန်စာများ – Myanmar Update News
News-Update | June 9, 2020 | Local News | No Comments
ပုဂံက ဘုရားတွေ ဒီတလော အဖေါက်ခံရတယ်။ ဖေါက်တဲ့လူက နားမလည်တာ လားတော့ မသိဘူး၊ ပုဂံခေတ် ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတွေတော့ မရသွားပါဘူး၊ ဘုရားတွေက ၂၀၀၅ ခုနှစ် ပါတ်ဝန်းကျင်က အထွဋ်တင် ပြုပြင်ထားတဲ့ စေတီပုထိုး
အသစ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဌာပနာထည့်လှုထားတဲ့ ပြုပြင်မွမ်းမံအလှုရှင်တွေ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ခရီးသွားတွေမရှိ ခြောက်ကပ်နေတဲ့အချိန်၊ ညမထွက်ရအမိန့်ကို အခွင့်ကောင်းယူသွားတဲ့ လူလွန်မ သားတွေပဲ။
ပုဂံခေတ်က ကျိန်စာတခုမှာ သူ့ရဲ့ဘုရားကို ပျက်စီးအောင် ကြိုးပမ်းသူကို ပုဂံနဲ့ ညောင်ဦးကြား မဟာပ ထဝီမြေကြီးရဲ့ မြေမှုံတမှုံ ကို တနှစ်နှုန်းနဲ့ မဟာအဝီစိမှာ ကျပါစေလို့ ကျိန်ဆိုထားခဲ့ဖူးတယ် ပုဂံမြို့ဟောင်း နဲ့ ညောင်ဦးက ၃ မိုင်ဝေးတယ်။
အလျှား ၃ မိုင် x မြေထု ၇၉၁၇ မိုင် ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းပေါ်က မြေမှုံတမှုံ တနှစ်နဲ့ နှစ်အရေအတွက်ဟာ မဟာကုဋေပေါင်းများစွာ ငရဲခမှာ…. မရေမတွက်နိုင်ဘူး။ အလွန်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
ကျိန်စာ အများစုမှာတော့ ဖျက်ဆီးသူဟာ အရိမေတ္တ ယျဘုရားရှင်ကို ဖူးခွင့် မရပါစေနဲ့ လို့ ကျိန်ဆိုတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးသောဘု ရားရှင် ပြီးတောင် သံသရာဝဋ် ဆင်းရဲက မကျွတ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းတာပဲ။
ပထမကျိန်စာထက် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ဘယ်ကမ္ဘာအထိ သံသရာလည်ကြရမယ်မသိ။ မောင်မင်း ကြီးသားများ ယာမတန်ခိုးလား ကိုဗစ်တန်ခိုးလား တော့မသိဘူး မကြောက်မရွံ သတ္တိ ကောင်းကြ ပါပေတယ်။
(Unicode version) ဘုရားဌာပနာ ဖောကျထှငျးသူတှေ မသိလိုကျတဲ့ ပုဂံဘုရားတှမှော ကြိနျဆိုထားတဲ့ ကြိနျစာမြား
ပုဂံက ဘုရားတှေ ဒီတလော အဖေါကျခံရတယျ။
ဖေါကျတဲ့လူက နားမလညျတာ လားတော့ မသိဘူး၊ ပုဂံခတျေ ရှေးဟောငျး ပစ်စညျးတှတေော့ မရသှားပါဘူး၊ ဘုရားတှကေ ၂၀၀၅ ခုနှဈ ပါတျဝနျးကငျြက အထှဋျတငျ ပွုပွငျထားတဲ့ စတေီပုထိုး
အသဈတှေ ဖွဈနတေယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဌာပနာထညျ့လှုထားတဲ့ ပွုပွငျမှမျးမံအလှုရှငျတှေ စိတျမခမျြးမသာ ဖွဈရပါတယျ။ ခရီးသှားတှမေရှိ ခွောကျကပျနတေဲ့အခြိနျ၊ ညမထှကျရအမိနျ့ကို အခှငျ့ကောငျးယူသှားတဲ့ လူလှနျမ သားတှပေဲ။
ပုဂံခတျေက ကြိနျစာတခုမှာ သူ့ရဲ့ဘုရားကို ပကျြစီးအောငျ ကွိုးပမျးသူကို ပုဂံနဲ့ ညောငျဦးကွား မဟာပ ထဝီမွကွေီးရဲ့ မွမှေုံတမှုံ ကို တနှဈနှုနျးနဲ့ မဟာအဝီစိမှာ ကပြါစလေို့ ကြိနျဆိုထားခဲ့ဖူးတယျ ပုဂံမွို့ဟောငျး နဲ့ ညောငျဦးက ၃ မိုငျဝေးတယျ။
အလြှား ၃ မိုငျ x မွထေု ၇၉၁၇ မိုငျ ဆိုတဲ့ ကိနျးဂဏနျးပျေါက မွမှေုံတမှုံ တနှဈနဲ့ နှဈအရအေတှကျဟာ မဟာကုဋပေေါငျးမြားစှာ ငရဲခမှာ…. မရမေတှကျနိုငျဘူး။ အလှနျကွောကျဖို့ ကောငျးတယျ။
ကြိနျစာ အမြားစုမှာတော့ ဖကျြဆီးသူဟာ အရိမတ်ေတ ယဘြုရားရှငျကို ဖူးခှငျ့ မရပါစနေဲ့ လို့ ကြိနျဆိုတယျ။ အဓိပ်ပါယျက ဒီဘဒ်ဒကမ်ဘာကွီးရဲ့ နောကျဆုံးသောဘု ရားရှငျ ပွီးတောငျ သံသရာဝဋျ ဆငျးရဲက မကြှတျပါစနေဲ့ ဆုတောငျးတာပဲ။
ပထမကြိနျစာထကျ ကွောကျစရာကောငျးတယျ။ ဘယျကမ်ဘာအထိ သံသရာလညျကွရမယျမသိ။
မောငျမငျး ကွီးသားမြား ယာမတနျခိုးလား ကိုဗဈတနျခိုးလား တော့မသိဘူး မကွောကျမရှံ သတ်တိ ကောငျးကွ ပါပတေယျ။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့မ ရဲစခန်းရှေ့ ဝင် ပေါက်အနီး ည ၈ နာရီ ၁၅ အချိန်တွင် ဗုံးပေါက် ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး သုံးဦးထိခိုက် ဒါဏ်ရာရ
မိုးကုတ်မြို့ရဲ့ သိန်းပေါင်း ၈သောင်းကျော် လိမ်လည်မှုကြီး အပြည့်အစုံအား ပုံကိုနှိပ်ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်